Umbulali kaDewani ufanelwe wudilika | IOL Isolezwe
Umbulali kaDewani ufanelwe wudilika
Isolezwe / 27 November 2012, 2:24pm /
UMBUSO uthi kumele agwetshwe udilikajele umlisa osolwa ngokubulala isivakashi sakuleli uNkk Anni Dewali owayevakashele leli zwe emuva kokushada.
INkantolo eNkulu eWestern Cape izolo izwe ukuthi uXolile Mngeni (25) akazange akhombise izimo ezingajwayelekile ezingenza ukuthi le nkantolo iguquke kwisigwebo esimiselwe umuntu osuke elahlwe yicala lokubulala okuhleliwe.
UMshushisi, uNksz Shareen Riley, uthe leli cala lokubulala lenziwa ngenxa yomhobholo nokuthanda imali okukhonjiswa wubufakazi obuveza okwenziwa nguMngeni emuva kokuthi enze leli cala. “Indlela enza ngayo, ukungazisoli, nokuhamba ethenga eWaterfront emuva kokuthi kwenzeke leli cala kwenza umfanele udilikajele,” kusho uNksz Riley.
UNkk Dewani wabulawa eGugulethu ngoNovemba 13, 2010 esehlakalweni sokudunwa kwemoto esasiyitulo, isidumbu sakhe satholwa ngosuku olulandelayo.
UMngeni utholwe enecala ngesonto eledlule ngokuhlela ukubulala uNkk Dewani, ukubamba inkunzi esebenzisa isihluku nokutholakala kwesibhamu nezinhlamvu.
UNksz Riley uthe uMngeni wakhokhelwa ukuthi abulale wabe esesebenzisa le mali angakaze abe nayo ukukhithiza ngosuku olulandela abulale ngalo.
Uthe uMngeni akubukeki engumuntu osengakwazi ukuthi isimilo sakhe sihlumeleliseke.
UNksz Riley uthe udaba lomdlavuza wobuchopho okuthiwa uphethe uMngeni akuyona into engaze ibekwe njengesizathu sokuthi acatshangelwe ngoba uma esegula kakhulu angakhetha ukuthi afake isicelo sokukhishwa ngoshwele wabagulayo.
IJaji uRobert Hennye lithe ngokombono walo, ukucela ukucatshangelwa ngesigwebo kukaMngeni kufaka phakathi nesimo sempilo, iminyaka yakhe, ukuthi uyaqala ukwenza icala nokuthi uvela emphakathini nasemndenini onjani.
Ngaphambilini udokotela owahlola uMngeni uthe uphethwe wumdlavuza wengqondo, uyedwa kuphela umuntu kwabayisihlanu abaphethwe yilo mdlavuza ophilayo eminyakeni emihlanu.